Horjoogayaasha Al-Shabaab Oo Laga Mamnuucay isticmaalka Talefonnada Smart Phones-ka « AYAAMO TV
Horjoogayaasha Al-Shabaab Oo Laga Mamnuucay isticmaalka Talefonnada Smart Phones-ka
628 Views Date February 10th, 2014 time 10:01 am
Kooxda banneysatay daadinta dhigga ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa ku dhaqaaqay tallaabooyin ay ku cuuryaaminayaan adeegyada bulshada kadib markii ay joojiyeen adeegsiga Intarnetka iyadoo horjoogayaasha kooxda mid walboo ka mid ah uu doonayo in uu la wareego taladda kooxda.
Al shabaab ayaa horey uga joojiyay deegaannada ay dalka kaga harsanyihiin isticmaalka Telefoonada Smart Phoneska loo yaqaano taasina waxaa sabab looga dhigayaa baqdina farabadan oo wajahday howrjoogayaasha kooxda.
Sidoo kale waxey hore u joojiyeen isticmaalka Diishashka iyo adeeggi shirkada Hormuud ee Zaad Service.
Horjoogaha ugu sareeyay maleeshiyaadkaasi ayaa waxa uu ku qasbay maleeshiyaadka iyo horjoogayaasha kooxda kuwooda wata telefoonada gacanta ee Smart Phones,ka in ay iska dhigaan oo ay iska bedelaan, isagoo taas bedelkeeda ugu hanjabay in qofkii lagu arko Smart Phones-ka in dil toogasho ah uu yahay maadaama iyaga dilkooda aanu laheyn meel loo cuskanayo iyo xeer midna.
Shalay ilaa xalay deegaannada shabaabka uu dalka kaga dhuumaaleeysanayo waxaa ka socda waxa soomaalidu ay u taqaano xaraash oo ah maleeshiyadka Axmed Godane ka amar qaadata oo shacabka ka gadanaya telefoonnadooda maadaama muddadii yareyd ee loo qabtay ay ku eekeyd 9-ka,bishan oo shalay aheyd.
Agaasimaha Radio Muqdisho C/raxiin Ciise Caddoow oo ah qabiir wax weyn kala socda arrimaha kooxdan bur burtay ayaa waxaa uu ka hadlay hagardaamooyinkii uu horjooge Axmed Godane uu ku laayay horjoogayaal badan oo kooxdan ka tirsanaa iyo sidoo kale sifooyinka kooxda ay hadda la soo baxday iyo horjoogahan dhuumaaleysiga ku jira kooxda tirada yar uu xukumo waxa kala heysta iyo waliba amarradii ugu dambeeyey oo ay soo saareen.
Maleeshiyada lagu qasbay in telefoonadooda gacanta ay iska iibiyaan ayaa shalay ilaa xalay waxay shacabka telefoonnadooda ay kaga gadanayaan lacag u dhaxeysa 20-25 Doolar, iyadoo telefoonnadaasi ay yihiin nooca Smart Phones-ka oo qiimihiisana aanu ka yaren 300-400 oo Doolar, waxaana ku qasabtay cadaadiska horjooge Axmed Godane uu maleeshiyaadkan ku hayo.